နှစ်ချို့ကော်ဖီ: April 2010
ချစ်တယ်ဆိုတာ နှလုံးသာနဲ့ အရှုံးပေးတဲ့ ကိစ္စနှစ်ကိုယ်တူ အတ္တ
တွေကို တံခွန်တိုင် တက်ပြလို့မှမရနိုင်တာ…။
မကံ့ကော်က ဖယောင်းသား ဆိုရင် ကျွန်တော်ကတော့အလယ်က
မီးစာ အပ်ချည်ကြိုးလေး ဖြစ်လိမ့်မယ်…
အတူတူလောင်ကျွမ်းဖို့ ဒါမှမဟုတ်လည်း အတူတူလင်းရှကြဖို့
ဘ၀က အဲဒီလို ပြဠန်းခံဖြစ်ပြီးသားလား မကံ့ကော်ရယ်…
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ မပါရင် ကျွန်တော်တို့ ခန္တာကိုယ်အတ္တထုထည်တွေက
ကမ္ဘာမြေကို လေးလံစွန်းထင်းစေတာ ကလွဲလို့ ဘာများပိုဖြစ်နိုင်မှာမို့လည်း..။
ကန္တရဆန်တဲ့နေ့စွဲတွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိမ်းလန်းအောင်
မကံ့ကော်ကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ စိုက်ပျိုးထားခဲ့ရတယ်…
မကံ့ကော်ရေ ဆယ်စုနှစ်တွေကတော့ လေထဲမှာပျောက်ပျက်သွားပါပြီ…
ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လွမ်းတတ်နေတုန်းလေ..
မကံ့ကော်ကို စတွေ့တဲ့ ဆောင်းမနက်ခင်းထဲက လေပြည်တွေဟာ
ကျွန်တော့်ကို ပွေ့ဖက်ထားတုန်းလို့ ကျွန်တော် တစ်ခါတစ်ခါ ခံစားမိနေတယ်..
ပူပြင်းလောင်မြိုက်လွန်းတဲ့ ကမ္ဘာမှာ နေသာထိုင်သာရှိပါရဲ့လား မကံ့ကော်
ဗဟိဒ္ဓ အရေးအခင်းတွေကြားမှာ ကဗျာရေးတဲ့ ကောင်လေးအကြောင်းကို
ကျွန်တော်ကတော့ စာရွက်အလွတ်တွေ တွေ့တိုင်း
မူလတန်း ကလေးတစ်ယောက်လို မကံ့ကော်ဆိုတဲ့ စာလုံးပေါင်းကို
မတော်တဆ မေ့ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ ချချရေးဖြစ်နေတယ်…
ဆယ်စုနှစ်တွေကြာတာတောင် မကံ့ကော်ရဲ့ စာသင်ခန်းထဲမှာ
မေးခွန်းတွေ အားလုံးအတွက် ကျွန်တော်မှာ အဖြေ တစ်ခုပဲရှိတယ်…
Posted by moehlaing nya at 1:25 PM
သစ္စာနီ၊ ဟိန်းမြတ်ဇော်၊ လူဆန်း၊ လွန်းဆက်နိုးမြတ်၊ မြေမှုန်လွင် စတဲ့ ကဗျာဆရာငါးယောက်ရဲ့ ကဗျာစုစည်းမှုစာအုပ်ဖြစ်ပြီး.. ငါတို့ စာပေ ကနေ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ပထမအကြိမ် အဖြစ်ထုတ်ဝေပါတယ်…။ ခေတ်ပြိုင်ဖြတ်သန်းမှုအနေနဲ့ ကဗျာဆရာတစ်ဦးချင်းရဲ့ ရေးချက်တွေကို အရောင်စုံတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်..။ ကဗျာအပေါ်မြတ်နိုးတန်းဖိုးထားပြီး ဘ၀အစိတ်အပိုင်းတွေထဲ ကဗျာနဲ့မှော်ဝင်မှု တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကဗျာ ဆရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ကဗျာနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ ရင့်ကျက်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို တွေ့မြင်ရပါတယ်..။ ခေတ်ကာလ အပေါ်သစ္စာထားတဲ့ အရေးအသားတွေဖြစ်တဲ့ အတွက် အနည်းငယ် ခါးသက်ကောင်း ခါးသက်နိုင်ပါတယ်… ဘ၀တန်ဖိုးကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဆာလောင်တတ်တဲ့ ကဗျာချစ်သူတွေအတွက်တော့ အာသီသတချို့ပြေပျောက်နိုင်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ညွှန်းဆိုပေးပါရစေ..။ နမူနာ ကဗျာတွေကို ပူးတွဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
ငါဟာရွက်လွှင့် ငါဟာရွက်လွှင့် သီချင်းကိုအော်ဆိုတယ်
ပြုဖူးခဲ့တဲ့ အပြစ်တစ်ခုအတွက် လူတွေကဲ့ရဲ့ကြတာဆန်းသလား
အိမ်ရှေ့လမ်းထွက်လျှောက်ရင်တောင် မြင်တဲ့သူက မတော်တဆလိုလို
(တကယ်က တမင်တကာ) တံတွေးကို အသံမြည်အောင်ထွေးတယ်မျက်နှာကို
လေဖြတ်ထားသလို ရွှဲ့ကြည့်တယ်အကြောင်းရှိလို့ အခေါ်အပြော
လုပ်ရင် ရွံ့သလိုလို တွန့်သလိုလို မကောင်းတတ်လို့ စကားပြန်ပြော
လိုက်ရတာလို့ သတင်းဖြန့်မယ် အဘိုးက တော်သလောက် အဖေက
ရည်မွန်သလောက် ဒင်းတို့ကျမှ မိုက်ရိုက်လိုက်ကြတာ ကြုံကြိုက်လို့
တွေ့တဲ့အခါ အဝေးကြီးက ပါတ်ရှောင်ပြေးပြီးရင် လက်ညိုးငေါက်ငေါက်
ထိုး မကောင်းပြောကြ အုပ်စုဖွဲစည်ကားနေတဲ့ကြားရောက်သွားရင်
ရှဲကနဲ ချက်ချင်း လူစုကွဲသွားကြ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမသိကျွမ်းဖူး သူ
ကတောင်ယောင်တောင်တောင်နဲ့ အမြင်ကပ်ခြင်းခံရ ဒီလိုနဲ့ ခုနစ်ရက်
ပြည့်လို့ လမ်းမှာတွေ့တော့ အလကားနေရင်း ပြုံးပြတာကြုံရတယ်
ဒီအင်္ကျီဘယ်က၀ယ်သလဲ ဒီဖိနပ် နဲ့သိပ်လိုက်တာပဲ အကြောင်းမဲ့သပ်
သပ် ထမင်းစားဖိတ်ကျွေးခံရ မတွေ့ချင်လို့ ရှောင်သွားရင်တောင်
နောက်ကဇွတ်အတင်း လိုက်နှုတ်ဆက်ကြ တော်လွန်းလို့ အိမ်က သား
သမီးတွေကို ဆုံးမတိုင်းထည့်ထည့် ပြောရတယ် မျိုးရိုးက ဂွတ်ရှယ်
ဘမျိုးဘိုးတူ သားသမီးတွေလေ အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာ ဖုန်းတ
ဂွမ်ဂွမ် လှမ်းဆက်ကြ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပြသနာအတွက် အကြံဥာဏ်
တွေ တောင်းလားတောင်း ထင်းရေးမီးရေး လာတိုင်ပင်လို့ တိုင်ပင် ဘာမဆို
ခင်ဗျားထောက်ခံမှုလေးပါမှ လုပ်ဝံ့တယ်ဆိုသူက ဆို ဒီမှာတော့ ဆရာကြီး
စတိုလ်နဲ့ပဲ နေရတော့မလိုလို ဘ၀င်ပဲ မြင့်ရတော့မလိုလို အနေအထားမှာ
နောက်ထပ် ခုနစ်ရက်တစ်ခါ ပြည့်ပြန်တော့ ငါဟာ ရွက်လွှင့်
ငါဟာ ရွက်လွှင့်ဆိုတဲ့ သီချင်းက တစ်ကနေပြန်စပါလေရော ။ ။
၀ယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်မြို့နဲ့ မန္ဘလေးမြိုပေါ်ရှိ စာအုပ်ဆိုင်တွေ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်.. ။ ခေတ်ပြိုင်မှတ်တမ်း အနေနဲ့ကဗျာချစ်သူတွေ ၀ယ်သိမ်းဆည်းထားသင့်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်..။
Posted by moehlaing nya at 11:28 AM
အခိုက်အတန့် နီးကပ်ခွင့်ရခဲ့တာလား. . . .
သွေးထွက်အောင် မှားခဲ့တယ် . . . . ၊၊ ၊၊
( ငါလည်း )
သန်းခေါင်ယံမှာ ည ပါမလာမှန်းသိရသလို . . .
ပိတ်ထားတဲ့ တံခါးရွက်တွေ ဖွင့်အဖတ်မှာ
အလင်းတစ်စက်မှ တွေ့ခွင့်မရဘူး . . . ၊၊
တစ်ရွက်ပြီး တစ်ရွက် လဲကျသေဆုံး
ပိုးကဗျာ ရေ . . .
အတိတ်ဆိုတာက တိတ်မနေခဲ့သေးဘူး ကွယ် . . . . ၊၊ ၊၊
Posted by moehlaing nya at 12:42 PM
Posted by moehlaing nya at 10:57 PM
ကျွန်တော်ဟာ ကုန်ကြမ်းရှာ ကုန်ချောရှားတဲ့
ဒေသခံတွေ ပြောတာတော့ ဓါတ်ပြားစက်ရုံတဲ့
သူက မလည်ပါတ်ရပဲ ခေတ်ကုန်သွားခဲ့တယ်လေ…။
Posted by moehlaing nya at 1:11 PM
ကဗျာ ဆရာမိုးဝေးရေးဖွဲ့ တဲ့ ကဗျာ ပေါင်း (၁၃၂) ပုဒ်ပါဝင်တဲ့ ကဗျာ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်..
မျက်နှာဖုံး ပန်းချီကို မောင်ဒီရေးဆွဲပါတယ်.. သူပဲ အကြမ်း သူပဲအချော… မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကနေ
အပြားခတ်ခံရတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ ၂၁ရာစုဆီကို ကဗျာဓါတ်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆုပ်ကိုင်ပြီးဖြတ်သန်းလာတဲ့
ဆရာမိုးဝေးရဲ့ စီးဆင်းမှုကို နှလုံးသားနှင့် မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်… ပါဝင်တဲ့ ကဗျာတွေက ၁၉၉၅ကနေ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အထိ ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ကဗျာများ ဖြစ်ပါတယ်.. ဆရာဇေယျာလင်းနဲ့ ဆရာအောင်ချိမ့်တို့က အမှာစာများ ပါဝင်ပါတယ်.. နှစ်ကာလများစာအုပ်တိုက်က ၂၀၀၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာမှာ ပထမအကြိမ်ဖြစ် ထုတ်ဝေပါတယ်.. ယနေ့ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာဟာ
မိုးဝေးကို အပိုင်ရသလို.. သူပဲအကြမ်း သူပဲအချောက ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်ကိုလည်း ပြန်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်…
ငါမပါဘဲ လိုက်သွားလို့ရတယ်လို့ လိုက်ဖူးလား
ရှေ့ မှာလာနေပြန်ပြီ ဟောရှေ့ မှာယုတ္တိယိုယွင်းစကားတစ်စီး
ငါလို့ ဘာကြောင့် ပြောလို့ပြောရတာလဲ
ပြောလို့ရတာတွေကို ဓါတ်ငွေ့တန်းစီးစောင့်သလို ဆောင့်တွန်းလိုက်ဦးကွာ
ဟေ့… ငါအရင်ရောက်တာ၊ ဟေ့… သူအရင်ရောက်တာ၊
ဟိုမင်း အရင်ရောက်တာဟေ့၊ ဟေ့… ဟိုကောင်အရင်ရောက်တာနော်
အော်ချင်သလိုအော်ကြ၊ ဆိုက်ရောက်ရာ သွားရမယ့် ဘူတာအဖြာဖြာ
ဝေနေတဲ့ ပန်းတွေဟာ လျှပ်စစ်သားနဲ့ လုပ်ထားတယ်
ဘူတာတွေဟာ လျှပ်စစ်အားနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ ထားတယ်
ဘူတာရှိရင် ရထားရှိရမယ်လို့ ဘယ်သံလမ်းက လမ်းပေးထားသလဲ
နောက်က ကားကို နောက်ခံကားပြောင်းကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ
အနက်တစ်ခုဆီပဲ ရောက်ချင်ရင် လိမ္မော်မရောက်ဘူးဟာ
စကားတိမ်သားများ နယ်စွန်နယ်ဖျား ဒေသများအထိ ပြေးလွှားနေကြသည်
ရှပ်ပြေးသဘောင်္ပေါ်မှာ ကိုရှပ်ပြေးတစ်ယောက် ရှပ်ပြေးနေသည်
ဟေ့ကောင် … ကြပ်ကြပ်သတိထားပြေး..။…။
Posted by moehlaing nya at 8:43 PM
နွေဦးဆိုတာက ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ပဲလေ… ။
Posted by moehlaing nya at 2:18 PM
ငါတို့ တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ် ဝေးကွာသွားခဲ့ရပြီ...။
Posted by moehlaing nya at 8:23 AM
Posted by moehlaing nya at 9:15 AM
ဘ၀မှာ ကြုံခဲ့တဲ့ နှစ်တွေများများ
ဧပရယ်လ် ကိုရောက်ရင် ခံစားချက်တွေလှိုက်ဖိုသွားတယ်
ဧပရယ်လ်ဟာ နှလုံးသားကို အမြဲဖမ်းစားခဲ့
ဧပရယ်လ်မှာပဲ ကမ္ဘောဒီးယား ထိုင်း
လာအို မြန်မာ အဲဒီလူမျိုးတွေ နှစ်သစ်ကူးတယ်
ဟစ်ကြွေးနေတတ်ပြီး ကိုယ့်ပုံစံခွက်ထဲမှာကိုယ် မွန်းကြပ်နေတဲ့သူ။
ယဉ်ကျေးတဲ့အပြုအမူနဲ့ ပျော်ရွှင်တတ်သူ ဧပရယ်လ်
ဖေ့ဘုတ်ခ်က ညီမလေး Tim Tam
ရန်ကုန်မြို့ပေါ်က သတင်းထောက်မလေး အိမ့်ခိုင်ဦး
ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့အတူ ငါတို့ ရင်ထဲကို အလည်လာပါ ဧပရယ်လ်
Posted by moehlaing nya at 9:44 AM